Kufufusa umbango ngefilimu kaBrenda Fassie | Isolezwe
Kufufusa umbango ngefilimu kaBrenda Fassie
Ezokungcebeleka / 16 January 2018, 1:26pm / MCEBO MPUNGOSE
Brenda Fassie .Isithombe: AFP
OWAYENGUPHROJUSA kaBrenda Fassie, uChicco Twala usola indodana yale nkakha yomculi ngokumhambela ngemuva odabeni lokwenziwa kwefilimu ngayo.
Ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi kunenkampani yaphesheya ezokhiqiza ifilimu ngempilo kaBrenda Fassie ngeledlule, uChicco uphumele obala wathi akukho filimu ezoqoshwa ngaphandle kwemvumo yakhe, kwazise onke amarekhodi alo mculi abhalwa adidiyelwa nguye futhi angawakhe.
Ekhuluma kwiMetro FM ohlelweni lukaMo Flava ngoMsombuluko uChicco uqhube waveza ukuthi empeleni yena nethimba lakhe bese kuneminyaka emihlanu behlela ukuqopha ifilimu kaBrenda futhi sebeqalile nokwenza ucwaningo ngayo.
"Sekuphele iminyaka emihlanu sisebenza phezu kwale filimu, ngemuva kokuthola izibusiso nemvume kwiBrenda Fassie Estate nakuBongani Fassie. Ngathola imvume kwisikhulu esiphezulu (angasishongo igama), uBongani wayekhona futhi sesichithe imali engaphezulu kuka R1.8 million senza ucwaningo, sakhokhela umbhali wefilimu futhi bengihlale ngikhuluma noBongani ngakho konke esikwenzayo," usho kanje.
UChicco usole inkampani yaseLondon, e-United Kingdom, iShowbizbee esifuna ukukhiqiza le filimu, ngokuthi ayilwenzile ucwaningo olwanele.
"Ucwaningo olwenziwa yilaba lwenzeke ngokuphazima kweso. Uma sikhuluma ngoBrenda Fassie udinga abantu abanolwazi olunzulu kanjalo nesikhathi. Awukwazi ukuvumela abantu ukuthi baqophe ifilimu ekhuluma ngoBrenda engathi baqopha ifilimu kaMadluphuthu," kusho uChicco.
Uqhube wagcizelela ukuthi ngeke avume ukuthi umculo wakhe usetshenziswe kule filimu.
Kukho konke lokhu uChicco usole uBongani ngobunyoka ethi wakhetha enye inkampani ekhiqiza amafilimu, ehlukile kunaleyo ayeyiqokile yena.
"UBongani wangivumela ukuthi ngenze ucwaningo yonke le minyaka, ngaya eKapa nakwezinye izindawo, ngamunikeza imali. Manje sekuqhamuka umuntu ethi uyasicisha isivumelwano sethu, awukwazi ukwenza leyonto. Ngingathanda ukubona bonke abantu ababayingxenye yempilo kaBrenda kule filimu. Kubalulekile ukwazi ukuthi uBongani nalaba bantu abenza ifilimu abazi lutho olutheni ngomlando kaBrenda. Abantu bakuleli bazonikezwa ifilimu ezoba yinhlekisa," usho kanje.
NgoMsombuluko ubhale kutwitter wathi akanankinga nabantu abangayithandi imibono yakhe ngefilimu kaBrenda.